धन कमाउनु भन्दा बचत गर्नु ठुलो कुरा हो : धन बचत गर्ने यी ७ सुत्र सम्झिनुहोस् …! - nepal day
धन कमाउनु भन्दा बचत गर्नु ठुलो कुरा हो : धन बचत गर्ने यी ७ सुत्र सम्झिनुहोस् …!
प्रकासन मिति : ४ माघ २०७८, मंगलवार १८:५३
बैंकको ब्याजले मात्रै पनि पुग्दैन । त्यसैले यसरी बचत गरेको पैसाले बीमा गर्नुहोस् । बीमा गर्नुभयो भने तपाईंले आफ्नो लाखौंको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सक्नुहुन्छ ।
बीमा गर्नका लागि खर्च गरिएको रकम पनि बचत नै हो ।खर्च गर्नुअघि १० पटक सोच्नुहोस् कि यो मेरो आवश्यकता हो कि होइन भनेर । यदि तपाईंको आवश्यकता होइन भने खर्च गर्नतिर नलाग्नुहोस् ।<strong>***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****</strong>